रेणु दाहाललाई भोट हाल पो भनेको हो प्रचन्डलाई किन ? शेर बहादुर देउवा ,, – Ranga Darpan
रेणु दाहाललाई भोट हाल पो भनेको हो प्रचन्डलाई किन ? शेर बहादुर देउवा ,,
असार ४- चितवन ,,नेपालि कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले चितवनमा आफ्ना कार्यकर्ता लाई झपारेका छन्। , मैले रेणु दाहाललाई भोट हाल्नुस भन्दा मान्नु भयन तर प्रचण्डलाई भोट हालेर जिताउनु भो। यसरि पार्टी यसरी पार्टी एकताबद्ध हुँदैन।
मेरो अभियान भनेको कांग्रेसलाई ठुलो र एक नम्बरको पार्टी बनाउने अभियान हो। चितवनमा नेपाल दलित संघको प्रदेश ३ भेलाको उद्‍घाटन गर्न पुगेका सभापति देउवाले चुनाव हार्नेहरूले त्यसको दोष आफूमाथि खन्याएको बताए। चुनावमा आफूले मात्र टिकट वितरण नगरेको भन्दै उनले दोष पनि आफूलाई मात्र नदिन आग्रह गरे।
अहिले पार्टीको सबै दोष मा माथि थुपारियको छ । , चुनाबको बेला दुई बाम एक भयको बेला एउटा कांग्रेस दुई, तिन ठाँउमा बाँडियाको समेत देवाले प्रस्ट पारे। हार्ने मान्छेले आफ्नो कमजोरी नखोजेर पार्टी सभापतिलाई दोष लगाउनु ठूलो अन्याय भएको देउवाको टिप्पणी छ। अब पार्टी भित्र बिबाद गर्नुको साटो पार्टीलाई कसरि बलियो बनाउन तिर लाग्न पर्ने देउवाले कार्यकर्तालाई बताय ।
बेल्जियम पनमा हाल्फ समय सम्म शुन्यले बरा बरी ,,